Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Ndevapi Vadiki Vakuru Vari Panjodzi YeColorectal Cancer?
Nhamba nyowani yengozi inogona kuona varume nevakadzi vari pasi pemakore makumi mashanu vangangove negomarara recolon kana rectum, chidzidzo chepasirese chinoratidza.
Zvibodzwa, nhamba iri pakati pe0 ne1, inogadzirwa kubva pakuverenga njodzi yevanhu yekuva negomarara mune chero nhengo yemudumbu inogayiwa zvichienderana ne141 genetic variants (shanduko muDNA kodhi) inowanzoitika muvanhu vane chirwere. Iyi inonzi inonzi polygenic risk score inobva yawedzerwa kuparallel risk calculation yakavakirwa pa16 mararamiro zvinhu zvinozivikanwa kuwedzera mikana yevanhu yekubatwa negomarara remudumbu, kusanganisira kuputa, zera, uye kuti yakawanda sei faibha uye nyama tsvuku iri kudyiwa.
Mwero yegomarara remukoloni nerectal yave kuwedzera pakati pevadiki vechidiki muUnited States, pamwe chete nedzimwe nyika zhinji. MuUS chete, mitengo yakawedzera gore rega kubva 2011 kusvika 2016 ne2% pakati pevanhu vadiki pane makumi mashanu.
Ichitungamirwa nevatsvagiri veNYU Langone Health uye neLaura naIsaac Perlmutter Cancer Center, chidzidzo chitsva chakaratidza kuti avo vane chepamusoro-soro, kana chetatu chepamusoro, chakasanganiswa polygenetic uye njodzi yezvakatipoteredza vaive mukana wakapetwa kana wekuita colorectal cancer kupfuura varume nevakadzi. zvibodzwa pazasi pechitatu.
"Zvatinowana pakudzidza zvinobatsira kugadzirisa huwandu hwegomarara remukati pakati pevechidiki muUnited States nedzimwe nyika dzakabudirira, uye zvinoratidza kuti zvinogoneka kuona avo vari panjodzi yechirwere," anodaro muongorori mukuru wezvechirwere, Richard Hayes, PhD, DDS, MPH.
Yakabudiswa mu Journal of the National Cancer Institute paIndaneti Jan. 13, chidzidzo chacho chaisanganisira kuenzanisa kwevanhu vakuru 3,486 vari pasi pemakore makumi mashanu vakaita chirwere chegomarara pakati pe50 ne1990 ne2010 majaya nevakadzi vakafanana vasina chirwere. Vese vaive vatori vechikamu muzvidzidzo zvekutsvagira vanhu gomarara muNorth America, Europe, Israel, neAustralia.
Hayes, purofesa muDhipatimendi rePopulation Health uye Environmental Medcine paNYU Grossman Chikoro cheMishonga, anoyambira kuti chishandiso chechikwata chake hachisati chagadzirira kushandiswa kukiriniki. Isati yagamuchirwa zvakanyanya, anoti kumwe kuyedzwa kunodiwa mumiyedzo mikuru yekunatsa modhi, kutsanangura kuti inganyatso shandiswa sei nevarapi, uye kuratidza kuti, kana ikashandiswa, iyo scoring system inogona kudzivirira kurwara nerufu.
Hayes anoti hazvisati zvanyatsojeka kuti sei huwandu hwegomarara recolorectal huri kuwedzera muvakuru vadiki. Kusiyana neizvi, nhamba dzekesi pakati pevakuru vakuru dzakadzikira zvakanyanya nekuda kwekufambira mberi mukuongorora uye kuwedzera kubviswa kwekukura kwekufungidzira vasati vaenda kugomarara.
Zvakadaro, anoti, kenza yemuura inouraya vanhu vanopfuura 53,000 gore rega rega muUnited States. Uye nekuda kweichi chikonzero iyo American Cancer Society uye federal nhungamiro zvino vakurudzira kutanga kwemaitiro ekuongorora pazera re45.
"Chinangwa chedu chikuru ndechekuita bvunzo yekufungidzira kuti vanhu vese vaone kana ivo, zvichibva pamagariro avo uye hutano hwavo, vanofanirwa kutanga kutariswa gomarara remukati," anodaro Hayes. Vanachiremba, chokwadi, vanoda chishandiso chinogona kushandiswa kare zviratidzo zveyambiro zvekutanga zvisati zvaoneka, sekurwadziwa kwemudumbu, kuderera kweropa, uye kubuda ropa rect.
Ongororo ichangoburwa yakaongorora data yakaunganidzwa kubva gumi nenhatu zvidzidzo zvegomarara muUnited States, Canada, United Kingdom, Germany, Spain, Israel, neAustralia.
Parizvino, vanopfuura 150,000 vekuAmerica vanoonekwa gore rega rega vane cancer yemucolon uye rectum.
DNA utano vanhu nyika dzakabatana